Mihovitrovitra Miaraka Amina Fetiben’ny Mozikan’i Amerika Afovoany i Costa Rica · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Febroary 2018 12:30 GMT
Naorin'i Manuel Obregón-n'i Costa Rica, niantomboka ho andrana ara-mozika iraisan'i Amerika Afovoany notarihin'ny Papaya Orchestra ny Papaya Music, izay itambaran'ireo dindo maoderina sy ireo feo an-tanàndehibe miaraka amin'ireo zava-maneno sy ireo gadona nentindrazan'ny Isthme an'i Amerika Afovoany. Avy amin'ny firenena fito samihafa ireo mpitendry zava-maneno efatra ambiny folo izay mitambatra ho Orkestra Papaya, ary samy mitondra mozika avy any amin'izay niaviany avy ny mpanakanto tsirairay ao anaty tetikasa. Miaraka amin'ireo zava-maneno nentindrazana sy ny fanahy eo an-toerana, namerina ny mozikan'ny tanindrazany ireo mpitendry zava-maneno, miainga avy amin'ireo masina ka hatramin'ny mahazatra andavanandro, ary mamehy ireo gadona samihafa ho anaty fotokevitra iray : Ny Mozikan'Izao Tontolo Izao Avy any Amerika Afovoany. Manasongadina ny fironana ara-poko sy ara-javakanto ao Amerika Afovoany ny Tetikasa Mozikan'i Papaya, izay ahitana ireo dindo Eoropeana, Afrikana ary ireo indizeny miara-tonga anaty fitambarana ara-mozika izay tsy ny Orkestra Papaya fotsiny, fa ny maha-izy azy ny Mozika Papaya ihany koa sy ny Papaya Fest ankehitriny.
Mihoatra lavitra noho ny herinandro iray tondraka kaonseritra ao San José, ny Papaya Fest, ahitàna ny Mozika Amerikàna Afovoany ihany koa izy io. Nitondra ny marika mahaleotena ho an'ireo toerampivarotana sangany momba ny mozika ho an'i Amerika Afovoany, mba hampitomboana ny fahafahana mahazo azy sy ny fahitan'ny olona azy ao Costa Rica, ny Central American Label Festival, sady nikarakara ireo famelabelarana niarahana tamin'ireo marika mahaleotena ireo ihany, toy ny Putumayo World Music sy ny Núcleo Contemporaneo de Sao Paulo mba hizara ireo traikefany amin'ny alalan'ny fametrahana ny mozika nentindrazana ho eo amin'ny tsenan'izao tontolo izao ho toy ny vokatra avo lenta sy afaka mifaninana. Hatreto aloha, toa nahomby ireo ezaka mba hanapariahana ny mozikan'i Amerika Afovoany any amin'ireo vahoaka mpihaino. Ho an'io Fetibe io, misy ireo fety maimaimpoana nomanina manerana ny lemaka afovoany tany anatin'ireo toerampivarotana goavana ary koa ireo fety tsy dia lafo tao an-tanàna afovoan'i San José. Taminà vidim-pidirana latsaky ny 2 dolara, dia azonao natao ny nijery ireo mpanakanto avo lenta tao anatinà fampisehoana tokana tsy manampaharoa.
Ireo hetsika goavana mikasika ny Papaya Fest dia ho atao ao Downtown San Jose, toerana tonga dia eo ankilan'ilay sekoly metalika manantantara ao Barrio Amon. Ny 16 Febroary, miaraka manomboka amin'ny Orkestra Papaya ny fetibe, amin'ny 7ora hariva. Ny faha-17 no andron'ny mozika Karaibiàna: Calypso Tarika mpanao Jazz avy ao Costa Rica, Honduras’s garifuna Aurelio Martínez, Costa Rican afro-Caribbean Cantoamerica ary hiseho amin'ny 7ora hariva ny Hondura's Guillermo Anderson. Avy eo, ny Sabotsy amin'ny 6ora hariva, hiaka-tsehatra ny mozikaly an-tanàndehiben'i Amerika Afovoany miaraka amin'ny Zokiben'i Belize hilalao miaraka amin'ny Amarillo avy ao Costa Rica, Cyan y Magenta, avy eo Panama's Señor Loop, Nicaraguan Perrozompopo ary Gandhi avy ao Costa Rica. Hifarana miaraka amin'i Malpais avy ao Costa Rica ny Fetibe ary hilalao miaraka ireo tarika rehetra ao Amerika Afovoany ny Sabotsy amin'ny 6ora hariva.
Ireo blaogera ao Costa Rica toa an'i Ana, Leo, Analu ary Julia Ardon manonona ilay Fetibe ary manasa ireo hafa mba hanatrika izany, mitantara ny zavatra niainany tamin'ny fividianana ireo tapakila fidirana i Jon4th4n, ny nanadinoany ny fanalahidiny tao anaty fiara sy ny fijanonana hanatrika ny fety natolotr'i Manuel Obregon tao amin'ny toeram-pivarotana lehibe malaza iray. Nanoratra tsikera momba ny nifidianana ny anarana i S, mihevitra fa ny teny “fest” dia efa be mpampiasa loatra sady tsy ahitana ny maha-izy, ary manolotra hevitra hoe “Festival de la Papaya”, fehezanteny iray amin'ny fiteny Espaniôla, ho toy ny fanehoana iray tsara indrindra ho an'ny kalitao goavana ananan'ireo fety.
Ireo blaogy hafa miresaka ny PapayaFest dia ny Centroamericanto, Vichitex sy ny tena blaogin'i Senor Loop , izay ahitàna ihany koa ny rakibolana manokana fiampitàna avy amin'ny teny Espaniôla ao Panama mankamin'ny teny espaniôla ao Costa Rica.